एमालेमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र केपी ओलीबीच लफडा ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
एमालेमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र केपी ओलीबीच लफडा !
एमालेमा विवाद देखिएको छ। वडा र पालिका अधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा तोकिएको समयमा नै गर्ने कि सार्ने भन्ने विषयमा विवाद सुरु भएको हो । विधान अधिवेशनले कार्तिक ६ गते वडा अधिवेशन र कार्तिक ९ गते पालिका अधिवेशनको मिति तय गरेको थियो ।
यसबारेमा बिहीबारका लागि तय भएको स्थायी कमिटी बैठकमा कुरा उठाउने पनि तयारी भइरहेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपस्थित बाग्मती प्रदेश अधिवेशन आयोजक कमिटीले बुधवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको बैठकमा मुख्यमन्त्रीसमेत रहेकी शाक्यले वडा अधिवेशन हतारमा गर्ने पक्षमा आफू नरहेको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।
पार्टीको केन्द्रले कार्तिक ६ गते वडा र ९ गते पालिका अधिवेशन गर्ने निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै शाक्यले त्यसका लागि तयारी नपुगेको बताएकी थिइन् ।
अधिवेशनका लागि सबै तयार हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकाले हतार गर्न नहुने उनको तर्क थियो । ‘वडा कमिटीको अधिवेशन, पालिकाको अधिवेशन भनेको केन्द्रीय कमिटीको महाधिवेशनभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ ।
यो हाम्रो आधार हो, हाम्रो धरातल हो । वडा अधिवेशन भनेको हाम्रो टेक्ने धरातल हो । त्यसैले पालिका र वडा अधिवेशन यो सामान्य हो, केही पनि होइन र हतार–हतारमा गरिहालौँ, जोसुकै नेतृत्वमा आए पनि हुन्छ भन्ने पक्षमा मचाहिँ छैन’ उनको भनाई थियो ।
वडा र पालिका अधिवेशनको माध्यमबाट गलत व्यक्तिहरू पार्टीमा प्रवेश गर्न लागेको शाक्यको भनाइ थियो । वडा र पालिका अधिवेशनमार्फत पार्टीमा व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थले प्रवेश पाइरहेको उनले आशंका व्यक्त गरेकी थिइन् ।
‘वडा र पालिका हाम्रो टेक्ने धरातल भएको हुनाले यहाँभित्र समूहगत स्वार्थ छिर्न दिनु हुँदैन । पार्टीभित्र यो पनि हाबी भएको छ । समूहगत स्वार्थ छिर्न दिनु हुँदैन । व्यक्तिगत स्वार्थ छिराउनु हुँदैन ।
आफ्नो पारिवारिक स्वार्थदेखि अनेकौँ स्वार्थहरू हाबी भइराखेको छ । यसो हुने हो भने पार्टीको वडा तह बलियो हुन सक्दैन, सुदृढ हुन सक्दैन,’ शाक्यले भनेकी थिइन् ।
केन्द्रीय सदस्य झपट रावल भने पार्टीभित्रको विवाद समाधान नभई सकेको, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा आएको बाढी र पहिरोको कारणले पनि वडा र पालिका अधिवेशन सार्नुपर्ने बताउँछन् ।
पछिल्लो केही दिनयताको वर्षाका कारण सुदूरपश्चिम र कर्णाली लगायतका प्रदेशमा सडक अवरुद्ध भएका छन् । त्यस्तै, किसानको भित्र्याउन लागेको बाली नष्ट भएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको सबैभन्दा ठुलो पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ता र नेतालाई पीडामा रहेका जनताको राहत र उद्धार मा खटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘यति बेला सुदूरपश्चिम र कर्णालीका विभिन्न भागमा विपद् आएको छ । यसले निम्त्याएको संकटसँग जुध्न सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीले आफ्नो शक्ति राहत र उद्धार मा लगाउनपर्छ ।
सरकारले किसानका लागि राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ,’ रावलले भने, ‘राजनीति जनता र देशको लागि हो भने वडा र पालिका अधिवेशन एक दुई हप्ता पछाडि सार्दा केही बिग्रिन्न । अहिले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने स्थिति पनि छैन ।’
एमाले बागमती प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष आनन्द पोखरेलले भने बाढी र पहिरोले ल्याएको विपद्लाई ख्याल गरेर नै तय मितिमा हुन नसकेका वडा र पालिका अधिवेशन कार्तिक १५ गतेसम्म गर्न सकिने निर्णय गरिएको बताउँछन् ।
अहिले सम्पूर्ण तयारी सकिएको अवस्थामा प्राकृतिक प्रकोपका नाममा अधिवेशन रोक्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘पार्टी सदस्यता नवीकरण सकिएको छ । अधिवेशनका लागि सबै जिल्ला बैठक भएका छन् । तय मितिमा भौगोलिक र पानी, बर्षाका आदिका कारण छुटेमा जिल्ला कमिटीले निर्णय गरेर १५ गतेभित्र सक्ने भन्ने छ ।’
केन्द्रीय सदस्य रावल भने १० बुँदेलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न पनि बाँकी रहेकाले वडा र पालिका अधिवेशन सार्नुपर्ने तर्क राख्छन् । ‘पार्टीको आन्तरिक जीवनभित्रका कुरा पनि बाँकी रहेका छन् ।
पार्टीको आन्तरिक विवादमा सामेल भएकै नाममा कतिपय पुराना कार्यकर्ता सदस्यता नवीकरणबाट वञ्चित भएर बाहिर रहने अवस्था आएको छ । मनमौजी ढंगले पार्टी सदस्यता दिने काम भइरहेको छ ।
यसलाई नरोक्ने हो भने पार्टीमा ठुलो समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने । पार्टीबाट विभाजित भएर अर्को पार्टी गठन गरेकालाई समेत फर्काउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा पार्टीमै बस्छौँ भन्नेहरूलाई पनि बस्ने वातावरण बनाउन नसकिएको उनको भनाइ थियो ।
बाग्मती प्रदेश अध्यक्ष पोखरेलले भने विधान महाधिवेशनको हलबाट भएको निर्णय उल्ट्याएर वडा र पालिका अधिवेशन सार्न सम्भव नभएको बताए । ‘वडा र पालिका अधिवेशनको यो निर्णय विधान महाधिवेशनको हलबाट सर्वसम्मत रूपमा भएको हो । सार्ने कुरा सम्भव छैन ।